Random Generator 2.0.14 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.0.14 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
Application မ်ား ကိရိယာမ်ား Random Generator
Random Generator ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ကျပန်း Generator ကိုကျပန်းနံပါတ်, ကစားတဲ့, ကျပန်းစကားဝှက် Generate ပြီးတော့ကျပန်းအသင်းများ ဖန်တီး. ကိုခပ်ရန်ရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူ App ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ကျပန်း Generator ကို Key ကို Features:
- ကျပန်းရလဒ်များ Duplicating မ၏ Feature ကိုနှင့်အတူနှစ်ဦးရွေးချယ်ထားသောနံပါတ်တစ် Range ခုနှစ်တွင်လေးကျပန်းနံပါတ်အထိ Generate ။
- သင် (သင်ပေါင်းထည့်လိုသည့်အထူးဇာတ်ကောင်ပြောင်းခြင်း၏ထို option နှင့်အတူ Capital ကိုပေးစာ, အသေးစားပေးစာ, နံပါတ်နှင့်အထူးဇာတ်ကောင်) ၎င်း၏အကြောင်းအရာထိန်းချုပ်နိုင်မယ့်ကျပန်းစကားဝှက် Generate ။
- ကျပန်းအန်စာတုံး Generate, သင် Up ကို6အန်စာတုံးသည်ကျပန်း Generate နိုင်သလား။
- ကစားတဲ့ Create, အဆိုပါကစားတဲ့လှည့်ဖျားပြီးတော့တစ်ဦးကျပန်း Value ကိုယူလိုက်ပါ။
- ရုံအဆိုပါကစားသမားများစာရင်း မှစ. ဒါဟာတင်သွင်းရန်, သင်အဆိုပါစာရင်း Save အကယ်. ယခင်ကသင်ကအဆိုပါအမည်များကိုသင်ဆွဲပါရန် Want တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန် Add ရန်မလိုပါ, ကစားသမားများစာရင်း Save ။
- သင်ကစားသမားများအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုနှုန်းကိုရွေးချယ်ပါခဲ့လျှင်အဆိုပါအနိမျ့အရည်အသွေးမြင့်ကစားသမားသာတူညီမျှအသင်းများမှ Distributed ခံရမှာဒါအဆိုပါ Draw, တရားမျှတသောလိမ့်မည်, အဆိုပါကစားသမားကို Select လုပ်ပါထို့နောက်အဆိုပါ Draw က Settings ကို Select လုပ်ပါ, ကျပန်းအသင်းများကိုဖန်တီးပါ။
- Arabic အဘိဓါန်
*** ကျပန်း Generator ကိုအကြောင်းမဆိုမှတ်စုများသို့မဟုတ်အကြံပေးချက်များအီးမေးလ်တွင်ဆက်သွယ်ရန်ပေးပါ။
Random Generator အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Random Generator အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Random Generator အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Random Generator အား အခ်က္ျပပါ
hadi120 စတိုး 4.28k 1.05M
Random Generator ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Random Generator အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.0.14
ထုတ်လုပ်သူ Apps n' Blue
App Name: Random Generator
Release date: 2019-07-23 13:35:09
လက်မှတ် SHA1: 10:18:B9:DD:6A:A1:64:DB:F1:4F:56:61:B1:44:C2:E7:4F:78:BA:5C
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Firas Natsheh
Random Generator APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ